Warbixin Laga Diyaariyay Sababaha Keenay In Aan Laga Guursan Beelaha La hayb sooco Ee Gabooyaha DAAWO | Somalidiasporanews.com
Warbixin Laga Diyaariyay Sababaha Keenay In Aan Laga Guursan Beelaha La hayb sooco Ee Gabooyaha DAAWO
London 12. September 2017 (SDN/QJ):- Guurka Soomaalida ayaanan ahayn oo keliya xidhiidh u dhaxeeya arooska iyo aroosadda balse sidoo kale waxa uu yahay xidhiidh u dhaxeeya qoysas iyo qabiilo.
Qofkii ka guursadana waxa uu halis ugu jiraa in la deyriyo, Sahra oo aanan aheyn magaceeda dhabta ah, ayaa waxa ay jeclaatay wiil gabooye ah 18 sano ka hor.
Guurkeeda looma arkin mid lagu farxay oo mudan in loo dabaaldego balse waxaa loo arkay mid ceeb iyo sharaf dhac ah, Waxaana kamida hadalkeeda. “Maalmo kaddib markii aan dhalay, waxaan tagay dukaanka, waxaase isoo eryaday shan dumar ah, markii hore waa ay I qaban waayeen, balse waan kufay, kaddibna waan miyir beelay, shan maalmood ayaan koomo ku jiray” ayay tidhi Sahra.
Todobaatameeyadii, Maxamed Siyaad Barre, ayaa soo saaray sharci diiday faquuqa ka dhanka ah qabiilada laga tira badan yahay.
Maanta Maryan waxa ay ku nooshahay London, waxa ay aaminsan tahay in ay tahay wakhtigii dadkeeda ay u istaagi lahaayeen cadaalad darada ay wajaheen.
“Haddii aad madaxaaga kor gayso, waxaa laguula dhaqmaa si habboon, haddiise aad isliidid waxaa laguula dhaqmaa sixun. Sidaas darteed waxaan ka codsanayaa bulshadeenna in ay u istaagaan xaqooda, naftoodana ku kalsoonaadaan si ay usoo ceshadaan qabkooda iyo aqoonsigooda” ayay tidhi Maryan Mursal.
Ninka lagu magacaabo Ismaaciil waa qof kale oo Gabooyaha ka tirsan oo London ku nool, waxana uu yidhi “Gabadhayda iyo nin yar ayaa is caashaqay, ka hor intii ayna bilaabanin xafladii meherka waxa ayna waydiiyeen qabiilkayaga, waxaan u sheegay in aan Gabooye nahay, waxayse noo sheegeen in ayna ka guursanin Gabooyaha, waxayna nagu yidhaahdeen aan dib u kulano, waa arrin aad niyad jab u ah oo bini’aadanimada ka baxsan”.
Balse ma fudada qarniya badan oo ay soo socdeen faquuq in la soo afjaro. ”Gabadhayda iyo nin yar ayaa is caashaqay, ka hor intii aysan bilaabanin xafladii meherka waxa ay na weeydiiyeen qabiilkeena”— Ismaaciil oo ku nool London.